Zava-dehibe amin'ny soavaly fifaninanana ve ny proteinina? | Soavaly Noti
rose sanchez | | sakafo, Fifaninanana feno
El soavaly dia tokony hampiditra forage amin'ny sakafony. Indrindra ireo soavaly mifaninana. Ankoatr'izay, ireo izay mipetraka eo anelanelan'ny fotoam-pampiofanana dia omena mololo sy mololo, izay sakafo voatondro hanomezana azy ireo proteinina ilainy. Na dia tsy tokony hihoatra ny 12% amin'ny sakafo amin'ny soavaly olon-dehibe.
Ny proteinina dia mitana andraikitra lehibe amin'ny dingan'ny fitaterana mineraly amin'ny alàlan'ny ra sy ho an'ny hery fiarovan'ny soavaly. Noho izany dia tena zava-dehibe izy ireo amin'ny fahasalaman'ny soavaly. Satria izy ireo no fototry ny fananganana sy fanamboarana hozatra ary hozatra malemy hafa ao amin'ny vatana.
Ho fanampin'izany, ny fihinanana sakafo ampy sy marina dia mety hanisy fahasamihafana amin'ny fanatanjahan-tena avo lenta. Soavaly mila proteinina 1000 - 1200 grama isan'andro ianao. Miaraka amin'ny salanisa eo amin'ny 9 kg sakafo isan'andro sy farafahakeliny kilao dia tokony hahazo proteinina ianao.
Sakafo sy proteinina ho an'ny soavaly fifaninanana
Raha ny marina, raha miresaka soavaly sarotra zahana isika, dia tsy ho zava-dehibe loatra izany satria mandray otrikaina ampy amin'ny sakafo isan'andro izy ireo. Na izany aza, miova tanteraka ny toe-javatra rehefa tsy maintsy miseho amin'ny fifaninanana fanatanjahan-tena henjana ny soavaly. Araka ny rehefa manemboka be izy ireo dia mila proteinina bebe kokoa. Ankoatr'izay, amin'ny fanatanjahantena avo lenta, lehibe kokoa ny enta-mavesatra, noho izany dia fantatsika fa mety ny mampitombo ny fahaizany amin'ny alàlan'ny sakafo tsara.
Ny soavaly fifaninanana dia tsy afaka manana tsy fahampiana eo amin'ny lafiny fanampin-tsakafo sy otrikaina. Satria tsy maintsy misoroka olana kely ianao alohan'ny hitrangan'ny ratra izay afaka mitazona soavaly lavitra ny fifaninanana mandritra ny fotoana maharitra.
ihany koa mitaona ny lanja sy ny toe-batana hanatanteraka ny fampiharana amin'ny fifaninanana. Ny fiovana kely amin'ny tavy amin'ny vatana dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny soavaly sasany. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fihoaram-pefy dia ratsy toy ny tsy fahampian'ny vatana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » sakafo » Zava-dehibe amin'ny soavaly fifaninanana ve ny proteinina?